Wararkii Ugu Dambeeyay Xaaladda Degmada Buurhakabo. – Calamada.com
Wararkii Ugu Dambeeyay Xaaladda Degmada Buurhakabo.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Iska hor’imaad gudaha degmada Buurhkabo ku dhexmaray Maleeshiyaat ka wada tirsan Maamulka Daba dhilifka u ah Xabashida Itoobiya ee isku magacaabay Degmada Buurhakabo.
Iska hor’imaadka ayaa yimid kadib markii ay isku dhiciin Maleeshiyaat Daacad u ah Madaxii Maaliyadda Ridada ee Buurhakabo oo xilkii laga qaaday iyo Maleeshiyaat Daacad u ah Murtadka cusub ee lasoo magacaabay Xilkaasi.
Midka Xilka laga qaaday ayaa gabi ahaan diiday inuu Xilka wareejiya waxeyna taasi sababtay in gudaha Degmada Buurhakabo ka dhaca iska hor’imaad xoogan oo dhexmaray Maleeshiyaat ka wada tisan Murtadiinta.
Inta la xaqiijiyay iska hor’imaadkan waxey Murtadiinta isaga dileen Saddex askari tiro kalane weey iska dhaawaceen, Iyadoona dagaalkan looga itaal roonaaday Maleeshiyaatkii Daacadda u ahaa Ninka cusub ee lasoo magacaabay Madaxa Maaliyadda Maamulka Ridada Buurhakabo.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Sarkaalkaasi isagoo dhaawac ah uu xalay ku hooyday Difaacyada Xabashida Itoobiya ee duleedka Degmada Buurhakabo, Waxaana suura gal ah maleeshiyaatka Murtadiinta markale ku dagaalamaan gudaha degmadaasi.
Previous: Maraykanka Oo Sheegay In Ciidamadiisa Uu Kala Baxayo Afghaninstan.
Next: Mareykanka Oo Dadkiisa Uga Digay Iney U Safraan Somalia.